Bathokozile ngokuthengwa kwecwecwe labo – Maskandi Media
Bathokozile ngokuthengwa kwecwecwe labo
Abafana bakaMgqumeni bedlulisa okukhulu ukuthokoza ngendlela icwecwe labo elisihloko sithi Bawucisha ngoparaffin lihamba kahle ngakhona ezitolo. Lezi nsizwa ezahlala esihlalweni esishisayo seBhova zingabanye babaculi
abangashayi eceleni uma bengena estage. “Kuyasithokozisa kakhulu ukubona leli cwecwe lenza kahle kanje. Silikhiphe ngaphambi kwephasika kodwa namanje lisenza kahle”.
“Inkulu indaba ingomhlaka 20 July 2019. Bayazike abathandi bomculo ukuthi asibekwa zihlalo uma sekumele sibajabulise senze lokho esakuzela kule ndima. Siyihhashi elibhokayo uma sesiphambi kwabo amatomu awafakwa unoma ubani”. Kubeka uSkhevana.
Le nsizwa izichithile izinsolo zokuthi isiculela Amabunjwa. Kuke kwaba namahebezi angemahle kuma social network besola sengathi isishiyile kweZebhova.
“Uyabazi nawe abantu bahlale bekhuluma. Into enjalo ayikaze ibebikho ngabe ngiyezwa ukube bathi ngipikwe Amabunjwa hhayi ukuthi ngiculela wona. Nakhona ayikho into enjalo. Imfezi ibingakaze isho lutho kimi angazi ubani lo ofafaza amanga kuma social network”.
“Thina siyojabulisa abantu ngomlilo osucishile. Kuyamangazake nokho ukuthi umlilo onjani lo ocishwa ngoparaffin eminye icishwa ngamanzi. Abeze ngobuningi babo abantu mhlaka 20 July bezobona Abafana bakaMgqumeni betshakadula bukhoma”.
Previous Previous post: UBobo ufisa ukuyogiya eMabhida
Next Next post: Uthembisa esezingeni lomhlaba i-DVD